प्राय: सोधिने प्रश्नहरू - सबपल्स
यहाँ हाम्रो प्राय: सोधिने प्रश्नहरूका उत्तरहरू छन्। यदि तपाईं यहाँ जवाफ पाउन सक्नुहुन्न भने, हामीलाई एक ईमेल पठाउनुहोस्।
म कसरी साइट प्रयोग गर्ने?
जब तपाई सबपल्स्.कॉम भ्रमण गर्नुहुन्छ, माथिको हेडर मेनूको "लगइन / रेजिष्टर" लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईले आफ्नो गुगल (युट्यूब) खातामा लगइन गर्न आवश्यक पर्दछ। एकचोटि तपाईंले आफ्नो खातामा लगईन गर्नुभयो भने, केवल अनुप्रयोग अनुमतिहरू स्वीकार्नुहोस् र तपाईंलाई तपाईंको सदस्यको पोर्टलमा निर्देशित गरिनेछ।
कृपया नोट गर्नुहोस्: हामी तपाईंको लगईन जानकारी प्राप्त गर्दैनौं वा तपाईंको YouTube खातामा जे पनि भए पनि कुनै पहुँच छ। तपाईंको खाताले सबपल्स वा कुनै अर्को पार्टीले पहुँच गर्ने कुनै चिन्ता बिना सबपल्स.कट सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछ। जब तपाईं सदस्यको पोर्टलमा हुनुहुन्छ, तपाईंलाई Sub सबपल योजनाहरू प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा बेसिक, स्टार्टर (सबैभन्दा लोकप्रिय), इन्टरप्राइज र सेलिब्रिटी समावेश छन्। तपाइँको विशेष आवश्यकताहरू र आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दै, तपाइँ नि: शुल्क योजनाको साथ वा सानो मासिक शुल्कको लागि, इन्टरप्राइज वा सेलिब्रिटी योजना जस्ता सशुल्क योजनासँग जाने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।
सबपल्स कति सुरक्षित छ?
SubPals.com एक सुरक्षित र विश्वस्त सेवा हो १००,०००+ भन्दा बढि सदस्यहरू द्वारा, मिनेटले बृद्धि गरेर! तपाईको गोपनीयता र सुरक्षा हाम्रो # १ लक्ष्य हो, त्यसैले हामी धेरै कडिंग कोडिंग र २ guard1,000,000 बिट ईन्क्रिप्शन प्रयोग गरी वेबसाइटलाई सुरक्षित राख्यौं।
के मेरो खाता लगइन जानकारी सबपल्समा भण्डारण गरिएको छ?
होईन! हामी तपाइँको कुनै पनि YouTube / Google लग इन जानकारी प्राप्त गर्दैनौं र हामी केवल तपाइँको च्यानल नाम, च्यानल URL र हाम्रो डेटाबेस भित्र ईमेल ठेगाना भण्डार गर्दछौं ताकि नेटवर्कले तपाइँलाई ग्राहकहरूलाई ठीकसँग वितरण गर्न सक्दछ। थप केही होइन!
नि: शुल्क योजना FAQ
नि: शुल्क योजना विवरण (मूल योजना)
जब तपाईं "सक्रिय गर्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई एउटा पृष्ठमा पुनःनिर्देशित गरिनेछ जहाँ तपाईंलाई १० अन्य च्यानलहरूको सदस्यता लिन आवश्यक पर्दछ र १० भिडियोहरू जस्तो। तपाईंले हरी "सक्रिय" बटन क्लिक गरेपछि, पृष्ठहरूमा लेखिएका निर्देशनहरूको अनुसरण गर्नुहोस् सफलतापूर्वक च्यानलहरू र भिडियोहरू लाइ सदस्यता लिन। यदि तपाईंलाई च्यानल मनपर्न र / वा सदस्यता लिन को लागी कुनै समस्या आएको छ भने, नयाँ च्यानल प्रदर्शित गर्न पहेंलो "स्किप" बटन क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाईं सफलतापूर्वक १० च्यानलहरूको सदस्यता लिनुभयो र १० भिडियोहरू मनपर्‍नुभयो, मूल योजना सक्रिय हुनेछ र तपाईंले २ hour घण्टा सक्रियताको अवधि भित्र subs ग्राहकहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो नयाँ प्रणाली धेरै नै कुशल छ र तपाईले सबै subs ग्राहकहरुलाई २ to घण्टाको मार्क अघि तपाईलाई फिर्ता डेलिभर गर्नुहुनेछ, बटन पुन: सक्रिय गर्नु अघि, तर दिमागमा राख्नुहोस् कि केहि व्यक्ति तपाईबाट सदस्यता रद्द गर्न सक्दछन्, यसले गर्दा तपाईले लगभग receive- प्रत्येक सक्रियताको समयमा subs सदस्यहरू। जो सबपलहरू मार्फत प्राप्त अन्य प्रयोगकर्ताहरूको सदस्यता रद्द गर्दछ तिनीहरू स्वचालित रूपमा प्रतिबन्धित छन्। आधारभूत योजनासँग २ मुख्य सीमितताहरू छन्, जुन यो हो कि तपाईंलाई प्रत्येक २5घण्टामा यो एक पटक मात्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइन्छ र तपाईंले आफ्नो योजना पुन: सक्रिय गर्नको लागि हरेक पटक सबपल्समा लगइन गर्नुपर्नेछ। यसको मतलव तपाईले "सक्रिय" बटन थिचे पछि तपाईले "सक्रिय" बटन फेरि अर्को २ 24 घण्टा सम्म प्रेस गर्न सक्नुहुने छैन। जब २ hour घण्टा समयावधि सकियो र तपाईंलाई फेरि "सक्रिय" बटन थिच्न अनुमति दिइनेछ, तपाईंले एक स्वचालित ईमेल सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ यदि तपाईंलाई यो प्राप्त गर्न रोज्नु भयो भने तपाईंलाई सम्झाउनको लागि।
नि: शुल्क योजना विवरण (स्टार्टर योजना)
जब तपाईं "सक्रिय गर्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई एउटा पृष्ठमा पुनःनिर्देशित गरिनेछ जहाँ तपाईंलाई १० अन्य च्यानलहरूको सदस्यता लिन आवश्यक पर्दछ र १० भिडियोहरू जस्तो। तपाईंले हरी "सक्रिय" बटन क्लिक गरेपछि, पृष्ठहरूमा लेखिएका निर्देशनहरूको अनुसरण गर्नुहोस् सफलतापूर्वक च्यानलहरू र भिडियोहरू लाइ सदस्यता लिन। यदि तपाईंलाई च्यानल मनपर्न र / वा सदस्यता लिन को लागी कुनै समस्या आएको छ भने, नयाँ च्यानल प्रदर्शित गर्न पहेंलो "स्किप" बटन क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाईं सफलतापूर्वक २० च्यानलहरूमा सदस्यता लिनुभयो र २० भिडियोहरू मनपर्‍यो, स्टार्टर योजना सक्रिय हुनेछ र तपाईंले १२ घन्टा सक्रिय अवधिमा १० सदस्यहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो नयाँ प्रणाली एकदम कुशल छ र तपाइँले सबै १० ग्राहकहरु लाई १२ घण्टाको चिन्ह भन्दा पहिले तपाईलाई फिर्ता डेलिभर गर्नेछ, बटन पुन: सक्रिय गर्नु अघि, तर दिमागमा राख्नुहोस् कि केहि व्यक्ति तपाईबाट सदस्यता रद्द गर्न सक्दछन्, यसले गर्दा तपाईले लगभग - प्रत्येक सक्रियताको समयमा १० सदस्यहरू। जो सबपलहरू मार्फत प्राप्त अन्य प्रयोगकर्ताहरूको सदस्यता रद्द गर्दछन् स्वचालित रूपमा प्रतिबन्धित छन्। यस स्टार्टर योजनाको मूल योजनाबाट दुई मुख्य भिन्नताहरू छन्। पहिलो भिन्नता यो हो कि तपाईं यसलाई सक्रिय गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र प्रत्येक १२ घण्टाको सट्टा प्रत्येक १२ घण्टा १० सदस्यता प्राप्त गर्नुहुन्छ। दोस्रो फरक यो हो कि १० अन्य च्यानलहरूमा सदस्यता लिनुको सट्टा, तपाईंले २० सदस्यता लिनु पर्छ। २० अन्य च्यानलहरूमा सदस्यता लिनु यो मुख्य कारण हो जुन यो योजना हरेक १२ घण्टामा सक्रिय हुन अनुमति दिइन्छ।
जब म मनपराउँछु र सदस्यता लिन्छु, प्रणालीले यो पुष्टि गर्न सक्दैन कि मैले यसलाई पूरा गरें।
हामीले गर्न सक्ने पहिलो सुझाव यो हो कि तपाईंले हाल प्रयोग गरिरहनु भएको भन्दा फरक युट्युब डट कममा युट्युब.क.मा लग इन गर्ने प्रयास गर्नु हो र हाम्रो वेबसाइटमा सदस्यता लिनु हो। तपाईंसँग subpals.com मा सेवाहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने लग इन गर्न क्षमता छ, तर एक योजना सक्रिय र एक अलग youtube.com खाता प्रयोग गरेर सदस्यता / सदस्यता लिन। कृपया यो पहिले प्रयास गर्नुहोस्। यदि यो काम गर्दैन भने, कृपया हाम्रो अन्य सुझावहरू पढ्न जारी राख्नुहोस्। धेरै सामान्य रूपमा, यो मुद्दा देखा पर्दछ किनकी आईपी ठेगाना तपाईले जोड्नु भएको दिनमा दिनमा धेरै च्यानलहरु को सदस्यता लिएको छ। अधिकतम संख्या करीव 754हो, त्यसैले यदि तपाईंले हाम्रो वेबसाइटहरू र सायद अर्को सब sसब वेबसाइट एकै दिनमा प्रयोग गर्नुभएको छ भने, तपाईं यो सीमामा पुग्नुभयो। यदि तपाई VPN वा Proxies प्रयोग गरी इन्टर्नेटमा जडित हुनुहुन्छ भने, सम्भव छ ती सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरिएका IP ठेगानाहरू पनि त्यो सीमामा पुगेका छन्। हामीले तत्काल सुझाव दिन सक्ने उत्तम समाधान भनेको २ 24 घण्टा पछि पुन: प्रयास गर्नु हो (यदि तपाईंले एकै दिनमा धेरै उप sसब वेबसाइटहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो), वा तपाईंको VPN वा प्रोक्सी जडानबाट विच्छेदन गर्न यदि तपाईं हाल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने। यसबाहेक, एक YouTube खाता अधिकतम २,००० च्यानलको सदस्यता लिन सक्षम छ। यदि तपाईंले पहिले नै २,००० अन्य च्यानलहरूको सदस्यता लिइसक्नु भएको छ भने, यस्तो कारण यो हुन सक्छ कि तपाईं आफ्नो प्रयासहरू सफलतापूर्वक दर्ता गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ। यस अवस्थामा समाधान भनेको तपाइँको सदस्यताहरू फिर्ता प्राप्त गर्न चाहानु भएको च्यानलसँग हाम्रो वेबसाइटमा लगइन गर्नु हो र त्यसपछि जब तपाइँ योजना सक्रिय गर्दै हुनुहुन्छ, फरक youtube.com खातामा लग इन गर्नुहोस्।
म योजना सक्रिय पार्न कोसिस गर्दछु, तर प्रणालीले मलाई च्यानलहरूको सदस्यता लिन दिदैन।
यदि तपाईंलाई कुनै कारणवश च्यानलको सदस्यता लिन समस्या भइरहेको छ भने, नयाँ च्यानल लोड गर्न केवल पहेलो "छोड्नुहोस्" बटन थिच्नुहोस्। एक पटक नयाँ च्यानल लोड भएपछि, तपाईं त्यसमा सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ र यसले काम गर्न सक्दछ। यदि यसले काम गरेन भने पृष्ठको शीर्षमा "लगईन" लिंक थिच्नुहोस् पुनः लगइन गर्नका लागि र त्यसपछि तपाईं जहाँ छोड्नु भयो पुनः सुरु गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। यो पृष्ठ ताजा हुनेछ।
म कसरी मेरो नि: शुल्क (आधारभूत वा स्टार्टर) योजना रद्द गर्न सक्छु?
तपाईको नि: शुल्क योजना रद्द गर्नु सजिलो छ। साधारण रूपमा सबपल्स.कटमा लग इन नगर्नुहोस् र हाम्रा सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईं अब कुनै नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त वा पठाउँनुहुने छैन। कृपया ध्‍यान दिनुहोस् कि SubPals.com को प्रयोगको बेला तपाईंले सदस्यता लिनुभएको च्यानलहरू तपाईंको खातामा रहनुपर्दछ अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग निष्पक्ष हुन।
उद्यम र सेलिब्रेटी योजना FAQ
उद्यम र सेलिब्रेटी योजना विवरण (भुक्तान योजनाहरु)
इन्टरप्राइज र सेलिब्रेटी योजनाहरू विभिन्न कारणका लागि धेरै लोकप्रिय छन्। जब तपाईं ईन्टरप्राइज वा सेलिब्रेटी योजनाको सदस्यता लिनुहुन्छ, तपाईं स्वचालित रूपमा १ single सदस्यहरू (इन्टरप्राइज) वा subs० सदस्यहरू (सेलिब्रिटी) प्रत्येक दिन, १०० स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। केहि प्रयोगकर्ताहरूले सदस्यता खारेज गर्नेछन्, तपाईंलाई प्रत्येक सक्रियता पछि करीव %०% सदस्यहरूको साथमा। नि: शुल्क योजनाहरूको विपरीत, इन्टरप्राइज र सेलिब्रेटी योजनाहरू १००% स्वचालित हुन्छन्, यसको अर्थ एकचोटि तपाईंले साइन-अप गरेपछि तपाईले फेरि सबपल्समा फेरि आउनु हुँदैन। हामी स्वचालित रूपमा प्रत्येक नयाँ दिन तपाईलाई नयाँ सदस्यता दिनेछौं ताकि तपाईको खाता एक सुरक्षित र स्थिर गतिमा बढ्न सजिलो होस्! हामीले इन्टरप्राइज र सेलिब्रिटी योजनाहरूको लागि चार्ज गरिरहेका मूल्यहरू ज्यादै कम वेबसाइटहरू भन्दा कम शुल्कहरू हुन्छन् “नक्कली” ग्राहकहरू जुन एकै पटकमा डिलिभरी हुन्छ प्राकृतिक-देखा पर्नेको सट्टा, दैनिक बृद्धि जस्तो हामीले डेलिभर गर्छौं। इन्टरप्राइज र सेलिब्रेटी योजनाहरू तपाईंको वृद्धि प्राकृतिक देखिन्छ र मूल्यको एक अंश खर्च गर्दछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ।
मैले ईन्टरप्राइज वा सेलिब्रेटी योजना सक्रिय गर्‍यो, तर मेरो सदस्यता सक्रिय छैन।
यदि तपाईंले सफलतापूर्वक ईन्टरप्राइज वा सेलिब्रेटी योजना खरीद गर्नुभयो, तर तपाईंको सदस्यता सक्रिय छैन भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस र हामीलाई लेनदेन वा रसीद पृष्ठ र तपाईंको च्यानल URL को स्क्रीनशट पठाउनुहोस्, जसले हामीलाई तपाईंलाई मद्दत गर्न आवश्यक सबै जानकारीहरू प्रदान गर्दछ।
मैले २ hours घण्टा भन्दा पहिले इन्टरप्राइज र सेलिब्रेटी योजना सक्रिय गर्‍यो र अहिलेसम्म कुनै सदस्यता प्राप्त गरेको छैन।
जब तपाईं ईन्टरप्राइज वा सेलिब्रेटी योजना खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईंको च्यानल केहि घण्टामा नेटवर्कमा प्रवेश हुन्छ र त्यसपछि २ 24 घण्टा भित्र रहन्छ, जुन तपाईंको पहिलो दिनको सुरूवात हो। त्यो २ hour घण्टा अवधिमा, तपाईंले आफ्नो दिनको ग्राहकहरूको कोटा प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यसपछि चक्र अर्को दिन दोहोरिन्छ। दिमागमा राख्नुहोस्, ग्राहकहरू तुरून्त आउँदैनन्, तर सबै २ delivered घण्टा भित्रमा वितरण गरिन्छ प्रत्येक दिन।
मेरो सदस्यता रद्द गरीएको छ। के भइरहेको छ?
यस प्रश्नको उत्तर दिन, त्यहाँ विचार गर्न केहि कारकहरू छन्। यहाँ तपाईंलाई के जान्नु आवश्यक छ: जब तपाईंले सबपल्स सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ, तथ्या .्कले देखाउँदछ कि तपाईंले प्रत्येक दिन प्राप्त गरेको लगभग 70-80% सदस्यहरू तपाईंको खातामा रहन्छन्। त्यो भनिएपछि, हामी अक्सर घाटाहरूको लागि क्षतिपूर्ति गर्न मद्दत गर्न अतिरिक्त दिन्छौं। ती सबै तपाइँको खातामा नहुनुको कारण हो कि केहि मानिसहरु नियम अनुसरण गर्दैनन् र सदस्यता रद्द गर्दैनन्, तर प्रतिबन्धित छन् र / वा यसको लागि जरिवाना लगाइन्छ र YouTube ले स्वचालित रूपमा केही सदस्यहरुलाई हटाउँछ। यसबाहेक, YouTube को भर्खरको एल्गोरिदमले प्राय: ग्राहकहरूको अंश मेटाइन्छ जुन डेलिभर गरिएको छ। YouTube ले मेटाउने मात्रा घटाउनको लागि, तपाईंले नयाँ भिडियोहरू राख्ने र तपाईंको भिडियोमा हेराईहरू र मनपर्नेहरूलाई बढाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यदि तपाईंसँग अवलोकनहरू भन्दा बढी सदस्यहरू छन् भने, यो त्यसो हुनको लागि तार्किक अर्थ राख्दैन, त्यसैले YouTube अधिक ग्राहकहरू मेटाउन बढी झुकाव हुनेछ। तपाईंले प्राप्त गर्नुहुने ग्राहकहरूको गुणस्तर इन्टरनेटमा खरीदको लागि सबैभन्दा बढी उपलब्ध छ र मासिक आधारमा तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको मात्रा इन्टरप्राइज वा सेलिब्रेटी योजनाहरूको कम लागतको लागि तपाईं कुनै वेबसाइटबाट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ भन्दा धेरै छ। हाम्रा धेरैजसो ग्राहकहरू सेवासँग धेरै खुसी छन् किनकि यसले वास्तवमै उनीहरूको च्यानललाई सस्तो मूल्यमा बढ्न मद्दत गर्दछ।
म मेरो सेवा रद्द गर्न र फिर्ती प्राप्त गर्न चाहन्छु।
यदि तपाईं सदस्यता योजना खरीद गर्नुहुन्छ र सेवामा खुसी हुनुहुन्न भने, कृपया हामीलाई तपाईंको सदस्यता भुक्तान मितिको days दिन भित्र सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंको सदस्यता पूर्ण रूपमा फिर्ता र रद्द गर्नेछौं। यदि तपाईं हामीलाई3दिन भन्दा बढी सम्पर्क गरे तपाईंको सदस्यता भुक्तानी भएपछि र फिर्ताको लागि अनुरोध गर्नुभयो, हाम्रो टीमले तपाईंको खाता समीक्षा गर्नेछ र यदि यो हाम्रो अन्त्यमा त्रुटि भएको कारण छ भने, हामी तपाईंको अर्डर पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्नेछौं, वा प्रमाणित रकम फिर्ता गर्नेछौं। महिनामा प्रयोग नगरिएका दिनहरू, वा केहि फिर्ता फिर्ता हुँदैन यदि यो ++ दिन पछि तपाइँले हाम्रो सेवामा सदस्यता लिनुभयो भने।
मैले फिर्ती ईमेल प्राप्त गरें, तर मैले आफ्नो अर्डर फिर्ता गर्न भनेन।
कहिलेकाँही, प्रयोगकर्ताहरूले एउटै सेवाको लागि बहु आज्ञाहरू राख्दछन् यसलाई साकार पनि गरेनन्। हामी यो म्यानुअली समीक्षा गर्दछौं जब यो हुन्छ र प्राय जसो केसहरूमा यो हामीलाई स्पष्ट हुन्छ कि प्रयोगकर्ताले त्यसो गर्न चाहेको थिएन। हामी त्यसो भए रद्द र अधिक अर्डर (हरू) फिर्ता गर्नेछौं, तर १ सक्रिय राख्नुहोस् ताकि तपाईं हाम्रो सेवा प्राप्त गर्न जारी राख्न सक्नुहुनेछ। फिर्ता रकम सामान्यतया --1 ब्यावसायिक दिनहरू तपाइँको खातामा फिर्ता देखा पर्दछ।
म कसरी मेरो भुक्तान सदस्यता रद्द गर्न सक्छु?
जब तपाईं ईन्टरप्राइज वा सेलिब्रेटी सदस्यता खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई स्वचालित रूपमा प्रत्येक महिनाको उही दिनमा बिल गरिनेछ। यदि कुनै बिन्दुमा तपाईंलाई उप उपसमूह सदस्यता आवश्यक पर्दैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् पृष्ठ को माध्यमबाट हामीलाई सन्देश पठाउनुहोस् र हामी तपाईंको खातालाई तपाईंको वर्तमान महिनाको सदस्यता समाप्त भए पछि सेट गर्नेछौं। उदाहरण को लागी, तपाईले महिनाको २rd औं सदस्यता लिनुभयो, तर अर्को महिनाको १० तारिखमा तपाईको खाता रद्द गर्न हामीलाई लेख्नुहोस्, हामी तपाईको खातालाई १ to दिन पछि रद्द गर्नेछौं, तपाईको हालको महिनाको सदस्यता पछि। यदि तपाईं तत्काल रद्द गर्न चाहानुहुन्छ भने, हामीलाई मात्र जानकारी दिनुहोस् र हामी तपाईंको लागि पनि त्यो गर्न सक्दछौं। तपाइँ कुनै पनि अवधिको लागि सदस्यता रहन बाध्य छैन, तर तपाइँ हामीलाई रद्द गर्न तयार हुँदा हामीलाई लेख्नुपर्नेछ। हामी त्यसपछि यो ह्यान्डल गर्नेछौं र तपाईंलाई एक पुष्टिकरण सन्देश पठाउनेछौं।
के म केवल १ महिनाको लागि भुक्तान सेवा प्रयोग गर्न सक्छु?
तपाईं हाम्रो अनसाइट भुक्तानी विकल्प प्रयोग गरेर भुक्तान योजना सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको योजना कुनै पनि समय रद्द गर्नुहोस्। केवल एक ईमेल भुक्तानी योजना को लागी हस्ताक्षर गरेपछि हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् र हामी तपाइँको खाता एक महिना अवधि पछि समाप्त गर्न को लागी सेट हुनेछ र तपाइँलाई फेरि बिल छैन।
कुनै क्रेडिट कार्ड छैन? समस्या छैन! उपहार कार्डको साथ भुक्तान गर्नुहोस्!
तपाईं हाम्रो अनसाइट भुक्तानी विकल्प प्रयोग गरेर भुक्तान योजना सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको योजना कुनै पनि समय रद्द गर्नुहोस्। केवल एक ईमेल भुक्तानी योजना को लागी हस्ताक्षर गरेपछि हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् र हामी तपाइँको खाता एक महिना अवधि पछि समाप्त गर्न को लागी सेट हुनेछ र तपाइँलाई फेरि बिल छैन। अब तपाईं उपहार कार्डहरू प्रयोग गरेर तपाईंको उद्यम वा सेलिब्रेटी योजनाहरू खरीद गर्न सक्नुहुन्छ! ओपनबक्स "गिफ्ट कार्डमार्फत भुक्तान गर्नुहोस्" को प्रयोगका फाइदाहरू
सम्झौता: +150,000 स्थानहरू उपहार कार्डमा तपाईंको नगद लोड गर्न।
कुनै शुल्क छैन: कुनै पुन: लोड, उपयोग वा सक्रियता शुल्क छैन! यो केवल तपाइँको पैसा हो - उपहार कार्डमा।
सुरक्षित: तपाईलाई पनी दर्ता गर्न वा उपहार / कार्डहरूको साथ भुक्तानी गर्न व्यक्तिगत / बैंकि info जानकारी दिनु पर्दैन।
सजिलो: डेस्कटप, ट्याब्लेट वा मोबाइलमा उपहार कार्डहरू खरीद गर्नुहोस् र भुक्तान गर्नुहोस्।
१. CVS / फार्मेसी, डलर जनरल वा ओबक्सबाट उपहार कार्ड खरीद गर्नुहोस्:
तपाईको जिप कोड प्रविष्ट गरेर तपाईले आफ्नो नजिकको खुद्रा विक्रेता स्थान जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
२. तपाईंको सबपल्स खातामा लगईन गर्नुहोस् र अपग्रेडको लागि कि त “इन्टरप्राइज” वा “सेलिब्रिटी” योजनाहरू छान्नुहोस्।
Check. चेकआउटमा "गिफ्ट कार्डहरूमार्फत भुक्तान गर्नुहोस्" छनौट गर्नुहोस् र जब तपाइँको उपहार कार्ड विवरण प्रम्प्ट हुन्छन्।
त्यो हो! अब तपाईं आफ्नो अपग्रेडको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ!
तपाइँको ग्राहक गणना बढाउन "#Unpopularopinions" को यूट्यूब ट्रेंड कसरी प्रयोग गर्ने बुझ्ने।
मिलेनियल र जेन जेड युट्यूब भिडियो उपभोग ढाँचाहरूको बारेमा तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ सबै
एक व्यवसायको लागि YouTube मार्केटिंगमा तपाईंको गाइड जुन तपाईं कानूनी रूपमा अनलाइन बेच्न सक्नुहुन्न
Streamular.com र यसको नि: शुल्क ट्विच अनुयायीहरू सेवा - एक पूर्ण समीक्षा
मार्केटिंगका लागि YouTube समुदाय ट्याब प्रयोग गर्नको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन